SF Bay Area Burmese (Myanmar) Community and Cultural Center Activities & Events: May 25, 2014 - 2014 SF Bay Area 3rd Annual Burmese Community Thingyan, Union City
2013 San Francisco Bay Area Community Thingyan Committee would like to happily announce that we raised total $10,155.77 fund from the 2013 Thingyan for establishing the first Burmese (Myanmar) Community and Cultural Center of SF Bay Area thanks to all volunteers, donors and helpers of the Burmese Community!
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မေလ (၂၅) ရက်နေ့တွင် စည်ကားအောင်မြင်စွာ ကျင်ပပြီးစီးခဲ့သော မြန်မာ Community and Cultural Center ဖြစ်မြောက်ရေး ရန်ပုံငွေ၊ တတိယအကြိမ် San Francisco Bay Area စုပေါင်း မဟာအတာသင်္ကြန် ပွဲတော်ကြီးသို့ တခဲနက်လာရောက် အားပေးကြ သည့် ရပ်နီး၊ ရပ်ဝေးမှ ဧည့်ပရိသတ် အပေါင်းနှင့်တကွ ဝိုင်းဝန်းကူညီ ပါဝင်ဆင်နွှဲကြသူများ အားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း လေးစားစွာ မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။ ။
၂၀၁၄ ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဗေးဧရိယာ မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော် ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီ
နှင့် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဗေးဧရိယာ မြန်မာကွန်မြူနီတီနှင့်ယဉ်ကျေးမှုစင်တာ ကော်မတီ
2014 SF Thingyan Record Pictures
Thank you Everyone for supporting and participating in the 3rd Annual Burmese Community Thingyan of SF Bay Area in 2014!
Posted by Mg Yekhaung (Silicon Valley) at 11:31 AM
SF Bay Area Thingyan Clips!